भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे
भाद्र १२, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
महोत्तरी — मौसम परिवर्तनसँगै महोत्तरीमा भाइरल ज्वरोको बिरामी बढेका छन् । भाइरलबाट जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तह प्रभावित भएको जिल्ला स्वास्थ कार्यालयले जनाएको छ ।
अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, स्वास्थ चौकी, निजी क्लिनिकमा ज्वरोका बिरामी उपचार गराउन भरिभराउ छन् ।
घाँटी खसखस गर्ने, नाकबाट पानी बग्ने, टाउको दुख्ने, मांसपेशीमा पीडा हुने, वाकवाकी लाग्ने, खान मन नलाग्ने, सयदेखि १०३ डिग्रिसम्म ज्वरो आउनेजस्ता लक्षणले बच्चादेखि वृद्धासम्म प्रभावित छन् । स्वास्थकर्मीकाअनुसार यस्ता लक्षण लिएर आउने बिरामीको चापले अस्पतालको बहिरंग कक्ष भरिभराउ छ ।
भाइरल ज्वरोका दैनिक २ सयभन्दा बढी बिरामी स्वास्थ संस्थामा आउने गरेको जिल्ला स्वास्थ कार्यालयले जनाएको छ । भाइरल ज्वरोको प्रकोप शिक्षणसंस्था पनि देखिएको छ । ज्वरोले विद्यार्थीको उपस्थिति पातलिँदै गएको स्थानीय विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकले जनाएका छन् । यो सर्ने भएकाले रोग लक्ष्ण देखिएका विद्यार्थीलाई घर फर्काउने गरिएको शिक्षकले जनाए ।
घरघरै बिरामी बढन थालेपछि विद्यालयमा नाम मात्रका विद्यार्थी उपस्थित हुने गरेको उनीहरूले जनाए । जिल्लाको मजदुरबस्तीमा समेत प्रकोप बढेकाले धान गोडने र हिउँदे तरकारी लगाउने बेला मजदुर अभाव भएको कृषकले जनाएका छन् ।
कैदीमा पनि भाइरल
भाइरल प्रकोपले ५० प्रतिशत कैदी प्रभावित भएको जलेश्वर कारागारले जनाएको छ । जेलर कन्हैया मिश्रकाअनुसार १ सय ३० कैदी क्षमता रहेको जलेश्वर कारागारमा पुरुष ४ सय ५६, महिला ४५ र आश्रित ४ गरी ५ सय ५ जना कैदी छन् । तीमध्ये आधाबढी रुघाखोकी र ज्वरोले ग्रस्त छन् ।
स्थान अभावले कोचिएर बस्नु पर्दा भाइरल संक्रमणबाट पीडित कैदीको संख्या बढदै गएको हो । औषधिको अभाव उपचारमा समस्या बनेको उनले जनाए । ‘तत्कालै सघन उपचारको व्यवस्था नमिलाए सबै कैदी बिरामी पर्ने सम्भावना बढेको छ,’ जेलर मिश्रले भने, ‘बन्दीगृहमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न जिल्ला स्वास्थ कार्यालय र नगरपालिकासँग समन्वय गर्दैछु ।’
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १०:०५
जीर्ण फलामे पुलको संरक्षण हुने
भाद्र १२, २०७६ प्रताप रानामगर
दमौली — तनहुँको भिमादस्थित सेतीनदी माथि जीर्ण अवस्थाको फलामे झोलुङ्गे पुलको संरक्षण हुने भएको छ । करीव ३ सय वर्ष पहिले ढोरफिर्दीको मिनाम खानीबाट फलामको धाउ निकालेर पुल बनाइएको थियो ।
पछिल्लो समय जीर्ण बन्दै गएपछि संरक्षण गर्न लागिएको भिमाद नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिं थापाले बताए ।
‘पुल जीर्ण बर्न्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन केन्द्र र पर्यटकीय दृष्टिकोणले पुलको संरक्षण गर्न लागिएको हो ।’ पुरातात्विक र ऐतिहासिक पुल भीमादको गहनासमेत भएकाले संरक्षण गर्न आवश्यक रहेका उनले बताए । पुलको दायाँबायाँ रहेको फलामको साङ्गलोको लठ्ठा राम्रै छ । तर, पुलमा बिच्छाएको काठको फ्ल्याक कुहिएर झरेको छ ।
पुलबाट आवतजावतका लागि भन्दा पनि पुरातात्विक सम्पदा एउटा गहनालाई सम्पत्तीका लागि संरक्षण गर्न लागएिको उनले बताए । पुल संरक्षणका लागि विस्तृत अध्ययनका लागि गतवर्ष नगरपालिकाले बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । पुलको डिपिआर, स्वागत गेट, मन्दिर परिसरको संरक्षणका लागि अघिल्लो बर्ष ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरेको उनले बताए । ‘यस वर्ष प्रदेश सरकारले ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट पुगेन भने नगरपालिकाले थप्नेछ ।’
जीर्ण पुलको संरक्षण गर्न दशकदेखि स्थानीयले माग गर्दै आएका थिए । पुल संरक्षणको प्रक्रिया थालिएकोमा खुसी लागेको स्थानीय हरि थापाले बताए । ‘लामो समयसम्म पुल संरक्षणका लागि आवाज उठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो माग पूरा होला जस्तो छ ।’ भिमाद घुम्न आउनेले गाडी रोकेर पुल हेर्ने र फोटो खिचेर जाने गरेको उनले बताए । स्थानीय ठाउँको खानीबाट फलामबाट पुल निर्माण गरेकाले बाहिरबाट आउने मानिसले सोधपुछ गर्छन । संरक्षण गरी पुलको इतिहास तथा दस्ताबेज राख्न सके पर्यटकलाई जानकारीका लागि सहज हुने थियो ।
तत्कालीन राजा सुरेन्द्रविरविक्रम शाह र प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुर राणाका पालामा पुल बनेको थियो । राजा सुरेन्द्रविक्रमले गुठी स्थापना गर्नका लागि लालमोहर लगाएको शिलापत्रमा छ । श्रीकृष्ण शाही र ढुण्डीराज शाहीले ७ सय रोपनी क्षेत्रफलमा गुठी दर्ता गराएका थिए । त्यही गुठीबाट उनले झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको तथ्य छ ।
शिलापत्र अनुसार उत्खनन गरेका काँचो फलामलाई कुँदेर पुलको निर्माण गरिएको हो । पुलमा जडान गरिएका सम्पूर्ण धातुहरू कुनै मेसिन र कलकारखानाबाट उत्पादित बस्तु नभई हातको सीप प्रयोग गरिएको देखिन्छ । वि.स २०२२ सालमा आएर गुठी सम्हाल्ने जुक्तराज शाहीले पुल फराकिलो बनाउन लगाए ।
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १०:०२
थप केही प्रदेश २बाट
अध्यक्षकै रिटले गाउँपालिकाको योजना रोक्का गर्न अन्तरिम आदेश
जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा ठप्प
बालिकाको बलात्कारपछि हत्या आरोपमा भारतीय पक्राउ
जनकपुरमा अर्धनग्न अवस्थामा मृत भेटिइन् बालिका
बर्थिङ सेन्टर निर्माण विषयमा धनुषामा झडप, प्रहरीले गर्‍यो हवाई फायर
बारामा डोजरमा आगजनी
अपडेटः शुक्रबार, २६ असार, २०७७ । १६ : २५ बजे
रवीन्द्र बस्नेत असार २६, २०७७
लकडाउनयता हामी अधिकांश समय विद्युतीय उपकरणहरू चलाउँदै घरै बस्न बाध्य छौं, कामका लागि होस् या मनोरञ्जनका लागि । यस्तो गर्दा हामीले शरीरलाई सही आसन (पोस्चर) मा...
देश फर्के ज्यानलाई खतरा
सोनु सिनाल असार २६, २०७७
लकडाउनलाई सुरुमा मैले सामान्य रूपमा लिएकी थिएँ । पहिला पनि बेलाबेला सीमा बन्द हुन्थ्यो, तैपनि म कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट डायलसिसका लागि सीमापारि खटिमा अस्पताल आउजाउ गरिरहन्थें ।
विश्वविद्यालय सुधारको बाटो
सञ्जय आचार्य असार २६, २०७७
मुलुकमा हाल ११ विश्वविद्यालय र ६ विश्वविद्यालयस्तरका स्वायत्त प्राज्ञिक संस्था छन्, तर समग्रमा उच्च शिक्षाको वातावरण अत्यन्त धूमिल हुन पुगेको छ । राजनीतिक भागबन्डा र खिचातानीले...
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम असार २६, २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संकटको कालो बादल मडारिइरहेको छ । बादल तत्काललाई कथं हटी नै हाल्यो भने पनि फेरि–फेरि मडारिन आउने पक्का छ ।
भारतीय मिडियाको नांगो रूप
सम्पादकीय असार २६, २०७७
पछिल्लो समय केही भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीलाई व्यक्तिगत रूपमा जोडेर प्रसारित भइरहेका सामग्रीहरू अवास्तविक र अतिरञ्जित मात्र...
कक्षाकोठाबाहिर खोइ समानता !
रुषा अधिकारी असार २५, २०७७
‘भित्र होइन बाहिरै है ! बाहिरै !’यस वाक्यले मलाई बाह्र वर्षको उमेरमा जातीयतामा आधारित भेदभावसँग पहिलोपटक साक्षात्कार गराएका थियो । समाजले तयार पारिदिएको जातीयताको वर्गीकरणमा ‘उपल्लो’...
कांग्रेसको भावी नेतृत्व
किशोर नेपाल असार २५, २०७७
चुनावी अंकगणितले पारेको अप्ठेरो अवस्थामा सत्ता र शक्तिको बहुदलीय समीकरण बनाउन अब्बल मानिने कांग्रेस सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई यसपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका...
स्वास्थ्यकर्मी–सेवाग्राही द्वन्द्वको अन्तर्य
जनार्दन थापा असार २५, २०७७
केही वर्षयता नेपालमा स्वास्थ्य संस्था र सेवाग्राहीबीचको द्वन्द्व, स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहारका घटनाहरू निकै बढेका छन् । हामीले भौतिक आक्रमण वा तोडफोडलाई मात्र समस्याका रूपमा हेर्दै आएका छौं ।...
यस्तो छ कोरोनाविरुद्धको खोप निर्माणको तयारी
डा. सन्तोष ढकाल असार २५, २०७७
विश्वभरका अनुसन्धानकर्ता कोभिड–१९ को खोप निर्माणमा लागिपरेका छन् । अहिलेसम्म १४५ भन्दा धेरै प्रकारका खोपको परीक्षण भइरहेको छ । साधारणतया खोप निर्माणको प्रक्रिया १० देखि...
कार्यकारीको लाचार छाया होइन संसद्
चन्द्रकिशोर असार २५, २०७७
गणतान्त्रिक व्यवस्थाको आगमनपछि पनि संसद्प्रति सरकारको रवैया बदलिन सकेको छैन । संसद्लाई हेर्ने कार्यकारीको चस्मा अहिले पनि पुरानै छ । यस्तै प्रवृत्तिको जगमा लोकतन्त्रको उन्नति र प्रगतिको...